Ahoana ny fomba ahazoako ny backlinks tsara indrindra amin'ny orinasako an-tserasera?
Noho izany dia efa nanatsara ny tranokalanao ianao, mametraka ny fahadisoana ara-teknika rehetra, mamorona tranonkala marina ary misafidy ny teny rehetra. Noho izany, ankehitriny vonona ny hitarika ny saina amin'ny moto miaraka amin'ny votoatiny vaovao sy ilaina ianao. Na dia izany aza dia asa sarotra ny mahita ny fahitana ao amin'ny Google SERP. Na dia eo aza ny ezaka rehetra ataonao amin'ny SEO amin'ny sehatra fanoratana sy fikarohana ao anaty votoaty, mety mamela zavatra iray manan-danja kokoa ianao amin'ny alalan'ny rantsan-tànanao - famerenana ny backlinks tsara indrindra.
Ity lahatsoratra ity dia hiresaka fomba fanao mahazatra ho an'ireo rakitra voajanahary voajanahary mba hahafahanao manangana fanentanana fanentanana handresy sy hampiroboroboana ny marikao amin'ny Internet.
Inona avy ny backlinks?
Alohan'ny handehanantsika mankany amin'ny fananganana rindrambaiko mifandraika, andeha horesahantsika ny momba ny backlinks sy ny anjara andraikitry ny fikambanana.
Amin'ny ankapobeny, backlinks dia rohy avy amin'ny tranonkala ivelany izay manondro ny sehatra misy anao. Miverina aminao izy ireo satria mahita ny votoatiny sarobidy ho an'ny mpamaky azy. Azo ampiasaina amin'ny tranonkala mpiara-miombon'antoka ao amin'ny tsenan-tseraseranao, ny tranonkalan'ny mpikaroka, ny media sosialy, ary ny loharanom-baovao azo antoka na fialam-boly. Na izany aza, na avy aiza izy ireo, ny backlinks tsara indrindra dia afaka manome ny ezaka fanatsarana ny fikarohana ataonao.
Fikarohana toy ny Google, Bing na Yahoo! Tena mankasitraka ireo tranonkala izay manavaka ny tombontsoany sy ny fahefany. Raha manana tranonkala backlinks maro izay manondro azy io (indrindra fa avy amin'ny sehatra mahatsikaiky sy maharitra), dia manome famantarana mba hitadiavana fitaovana izay azo itokisana ny tranonkala iray ary mendrika ny hanatsara kokoa ny valin'ny fikarohana. Ny vohikala tranonkala azo itokisana izay mifandray amin'ny iray hafa dia mamorona sombin-kevitra lehibe ho an'ny fikarohana. Na izany aza, ny fananganana tambazotran'ny backlinks dia ny asa mampahatahotra izay mitaky fahalalana manokana. Ity ilainao manaraka ity dia hanampy anao hamaha ny lalam-piofanana tsara indrindra ao amin'ny tranokalanao ary hanatsara ny doka misy anao.
Fomba hahazoana ny tsara indrindra amin'ny backlinks amin'ny tranokalanao
Mamorona votoatin'ny kalitaon'ny olona
Ny fanentanana fananganana rohy hananganana dia tokony hanomboka amin'ny bilaogy. Eto ianao dia mila mamoaka lahatsoratra vaovao tsy manam-paharoa mifandraika amin'ny orinasa sy orinasa misy anao. Mila mizara torohevitra mahasoa amin'ny mpihaino anao ianao fa tsy ho afaka hahita toerana hafa. Tsy misy antony tokony hampiasana ny blôginao ho toy ny toerana hametrahana ny teny fikarohana. Mila mamoaka votoaty izay mendrika ny mombamomba ny mpampiasa. Raha mamorona votoaty mamaly ny fanontaniana mandoro ao amin'ny orinasa ianao, dia ho lasa mpitarika eo amin'ny sehatra misy anao ary mahazo siramamy mifandraika amin'ny tranokalanao. Ankoatra izay, ireo mpitoraka blaogy sy mpanao gazety hafa dia te hanoratra ny votoatiny ho loharano azo antoka.
Mba hahazoana mora kokoa ny backlinks tsara, azonao atao ny mampihatra tetika fitorahana bilaogy ho an'ny fanentanana fananganana rohy. Ny blaogin'ny gasy tsara indrindra dia miasa amin'ny paikady tsotra. Ny manam-pahaizana momba ny orinasa dia manoratra bilaogy iray amin'ny tranonkala iray hafa. Fotoana tsara indrindra hanampiana ireo tamba-jotra sy hanangona jiosy fifandraisana amin'ny fotoana iray ihany Source .